Terrazas De Los Andes Reserva Chardonnay 2015 ~ ICT.com.mm
HomeTerrazas De Los Andes Reserva Chardonnay 2015
Terrazas De Los Andes Reserva Chardonnay Alcohol: 14% Dry/ 2015 Mendoza/ Argentina အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထုတ် Terrazas De Los Andes အမှတ်တံဆိပ် Reserva Chardonnay 2015 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးသော ဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေတည်ရှိရာ Mendoza ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay... [Learn more]
Brand: TerrazasFilter by: Wine
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထုတ် Terrazas De Los Andes အမှတ်တံဆိပ် Reserva Chardonnay 2015 ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးသော ဝိုင်စပျစ်ခင်းတွေတည်ရှိရာ Mendoza ဒေသကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံး အဖြူရောင်ဝိုင်စပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chardonnay စပျစ် ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 14% ရှိတဲ့ Dry/ 2015 ဝိုင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်သားဟင်းလျာ၊ အနံ့အရသာထူးကဲတဲ့ငါးတွေဖြစ်တဲ့ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ အသီးအရွက်ဟင်းလျာတွေနဲ့ ကြက်/ဘဲဟင်းလျာ စတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ လိုက်ဖက်လှတဲ့ အာဂျင်တီးနားဝိုင်ဖြူ ဖြစ်ပါတယ်။
Color of yellow with golden hues. Fresh and fruity character of white peach, pear and pineapple with citric hints. Aromas of white roses and brioche appear together with subtle notes of hazelnut and vanilla.
Pair nicely with pork, rich flavoured fish such as salmon, tuna, vegetarian dishes or poultry.